I-50 GB yendawo yamafu yasimahla ene-MEGA | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kokuzama ukwenza ukuba umfundi acinge ukuba siyayazisa kwaye siyayazisa le nkonzo yokubamba iMEGA, into esiya kuyenza kukuqaqambisa izibonelelo esizibonisayo, ukuba nazo izibonelelo ezimbalwa kunye nokungalunganga ekufuneka sazi ngako konkes xa kuziwa ekusingatheni ulwazi olubalulekileyo kuthi ngaphakathi kweeseva zakho efini.
Phantse sinokuqinisekisa ukuba kukho izibonelelo ezingaphezulu kokungalunganga ngokwemiqathango yale nkonzo isinika yona Indawo yokuhlala yeMEGANangona kuhlala kufanelekile ukukhankanya nganye yezi zinto ukuze ibe ngumsebenzisi wokugqibela ogqiba ukuba bayayifuna okanye abayifuni.
1 Izibonelelo zokusebenzisa inkonzo yokubamba iMEGA
2 Ukungancedi kokusebenzisa inkonzo yokubamba iMEGA
Izibonelelo zokusebenzisa inkonzo yokubamba iMEGA
Siza kuqala ngokuzama ukudwelisa ezinye zeenzuzo ezininzi esinokuthi sibe ngabaxhamli bokusebenzisa inkonzo ye Indawo yokuhlala yeMEGA, into esiza kuyichaza ngezinto ezimbalwa ezingezantsi:
I-50 GB isimahla. Ngelixa kuyinyani ukuba iGoogle Drayivu isinika i-15 GB simahla, ayonelanga kwinani elikhulu leefayile okanye usetyenziso esifuna ukusingatha efini. Ngesi sizathu, i-50 GB lilungu elihloniphekileyo lokuba sikwazi ukusebenzisa ngokuthozamileyo lonke ulwazi esiludingayo thina kunye nabanye abantu ukuba sabelana ngalo nge-URL esibonelela ngenkonzo efanayo.
Ungqamaniso. Le yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo, kuba Indawo yokuhlala yeMEGA Ingasetyenziswa kwisikhangeli sethu se-Intanethi (iGoogle Chrome iyacetyiswa) kwikhompyuter yakho, kwaye usetyenziso olufanelekileyo lwe-Android lunokukhutshelwa kwakhona kuGoogle Play ukuze isetyenziswe kwiitafile okanye iifowuni eziphathwayo.
Isantya sokukhuphela. Ngaphandle kwezinye iinkonzo ezikhoyo kwiwebhu (i-RapidShare, i-UpLoad phakathi kwabanye), ukuze ukwazi ukulayisha okanye ukhuphele iifayile kwindawo yethu efini ngenkonzo ye Indawo yokuhlala yeMEGASiza kudinga unxibelelwano lwe-Intanethi olulungileyo, kwaye akukho hlobo luthintelo kwisantya njengoko ezinye iinkonzo ezifanayo zihlala zinikezela.
Yenza ifolda okanye imikhombandlela. Ukuze izicelo okanye iifayile zethu zihlelwe kakuhle, iifayile ze- Indawo yokuhlala yeMEGA isinika ithuba lokudala iifolda okanye imikhombandlela kwiakhawunti yethu. Lo msebenzi unokwenziwa ngendlela elula kwaye ufana kakhulu nento esinokuyenza, kunye nomhloli wefayile yethu.
Kuzo zonke iimpawu esele sizikhankanyile apha ngasentla, mhlawumbi kufanelekile ukuqaqambisa ukubaluleka kwenkonzo Indawo yokuhlala yeMEGA xa kufikwa ekwabelaneni ngeefayile phakathi kwekhompyuter kunye nezixhobo eziphathwayo; Umzekelo, umntu unokulayisha naluphi na uhlobo lwe iifayile okanye amaxwebhu kwi-MEGA usebenzisa ikhompyuter yakho kunye nesikhangeli seGoogle Chrome, esikwaziyo ukuvula usetyenziso oluzinikeleyo kwi-Android, ukukhuphela iifayile ezifanayo kwifowuni yakho.
Ukungancedi kokusebenzisa inkonzo yokubamba iMEGA
Njengoko sicebisile ekuqaleni, izibonelelo zikhulu kunezinto ezingeloncedo xa usenza uhlalutyo oluncinci loku inkonzo ye Indawo yokuhlala yeMEGA; Nangona zinokubakho ezininzi ezi ngxaki, mhlawumbi eyona ibalulekileyo ifunyenwe kukophulwa kwelungelo lokushicilela, kuba ukuba umntu uyakwazi ukubamba uhlobo oluthile lweefayile okanye usetyenziso (nayo, imifanekiso okanye iividiyo) ezingakhange zifunyanwe ngokufanelekileyo ngokuthenga. yelayisenisi yabo, ukuza kuthi ga ngoku kuqatshelwe ukuba abalawuli be-MEGA abakwazanga ukucoca iifayile ngokuzicima.
Ukushiya ecaleni le nkalo yokugqibela, namhlanje i inkonzo ye Indawo yokuhlala yeMEGA Sele inesicelo sayo kunye neempawu ezongeziweyo eziphuculweyo, into eyayingenzekanga ngaphambili, kuba umsebenzisi we-Android (ukunika nje umzekelo) ebesebenzisa umthengi okhethekileyo ukuze akwazi ukusebenzisa esi sithuba Yokugcina efini, imeko okwangoku yenye yeenzuzo ezinkulu zokuba ne-50 GB isimahla.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Umphathi weMega, isicelo seMEGA se-Android
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Inkonzo yokubamba iMEGA, kutheni uyisebenzisa phakathi kwabanye?
Uhlalutyo lweRyse: Unyana waseRoma